लगभग कुनै पनि शहरमा तपाईं प्रसिद्ध व्यक्तिहरूलाई स्मारक हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सबै विभिन्न ढाँचाहरूमा मारिएका छन् र पूर्ण अर्थ राख्छन्। साथै, तपाईं अक्सर प्रसिद्ध मान्छे को बसहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू शहर र संग्रहालयमा दुवै सडकमा पाइन्छन्। यी धेरै मूर्तिकलाहरू कलाको वास्तविक कामहरू हुन्। अब यो प्रश्नलाई हाइलाइट गर्न अधिक महत्त्वपूर्ण छ, मूर्तिकलाको सन्दर्भमा के हो? यस रूप मा सांस्कृतिक विरासत को धेरै वस्तुहरु बनाइन्छ।
मूर्तिकलामा के हो?
त्यसोभए, को लागी बोलाउनु भनेको के बुझ्न आवश्यक छ। बस्ट एक मूर्तिकला कार्य हो जसले हेड, कंधा र मानव छातीको भागलाई चित्रण गर्दछ। प्रायः यो मूर्ति एक स्ट्यान्डमा अवस्थित छ। यसकारण, कुन बस्टको प्रश्न, विचार गरिएको छ, अब यो यसको विशेषताहरू उल्लेखनीय लायक छ।
मूर्तिकलामा यो दिशाको मुख्य विशेषता विशेषता तीन-आयामी आकार हो, जसको लागि यो समान सुविधाहरू पुन: सिर्जना गर्न सम्भव हुन्छ। बस्ट - यो मूर्तिकला चित्र को सबै भन्दा लोकप्रिय दिशाहरु मध्ये एक हो। यसले राती प्रकारको मूर्तिकलालाई बुझाउँछ (जसको अर्थ तीन-आयामी वस्तुहरू - जस्तै मूर्ति र एक मूर्तिकला समूह)। यस प्रकारका वस्तुहरू भिन्न हुन्छन् जुन तिनीहरू कुनै पनि बिन्दुबाट हेर्न सकिन्छ, किनभने तिनीहरू तीन-आयामी हुन्। त्यस्ता तथ्याङ्क सामान्यतया धेरै बलियो सामग्री बनाइन्छ, प्रायः तपाई संग संगमरमर र कांस्य बसहरु पाउन सक्नुहुन्छ।
दिशाको इतिहासको बारेमा एक साटो
तपाईलाई थाहा छ, मूर्तिकलाको विकास समय अनैतिक रूपमा सुरु भयो। विशेष रूपमा लोकप्रिय थियो र अझै पनि चित्र शैली हो। यो उहाँसँग छ र बस्टलाई बुझाउँछ। जब एक बस्टको प्रश्नको जवाफ दिँदै, मानिसहरू सामान्यतया धेरै उदाहरणहरू सम्झन्छन् जुन तिनीहरूले कहिल्यै देखेका छन्। केही रिपोर्टहरूको अनुसार, धेरै मूर्तिकला राज्य र राष्ट्रीयताको जन्म पनि अघि देखा पर्यो। यद्यपि, यदि हामी एक गोल मूर्तिकला बारे मा कुरा गर्छौं, र तदनुसार, र बसको बारेमा, त्यसपछि तिनीहरूको ठूलो संख्या पुरातन मिश्र र पुरातन ग्रीसको कलामा हेर्न सकिन्छ।
विश्व संस्कृतिमा प्रसिद्ध बसहरू
यो दिशाको एक उल्लेखनीय उदाहरण नेफेटिटिको बिस्तार हो, जुन अब बर्लिनको एक संग्रहालयमा भण्डार गरिएको छ । यो कार्य पुरा तरिकाले प्राचीन मिश्रको ललित कलाको विकासमा विनाश मानिन्छ । Bust of Nefertiti असाधारण सुन्दरता को तीन-आयामी मूर्तिकला हो, जसको टाउकोमा कालो रङको साथ। पुरातत्त्वविद्हरूले केवल कलाको काम नखोजेका छन्, तर पनि धेरै सिस्ट र मास्क कि उत्कृष्ट कृति बनाउनका लागी मोडेलको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
यदि तपाईं पुरातन युनानको इतिहास हेर्नुभयो भने, तपाईं धेरै अद्भुत उदाहरणहरू पाउन सक्नुहुन्छ। पुरातन युनानी मूर्तिकलाहरूको मुख्य विचारहरूमध्ये एक विश्वको सबै सौन्दर्य सुन्दरता व्यक्त गर्न र देखाउन थालेको थियो। यस कार्यको साथ, यस कला दिशाले उत्कृष्ट काम गर्दछ, किनकी अन्य जहाँ, मूर्तिकलामा छैन भने, त्यहाँ व्यक्तिको सबै सुविधाहरू व्यक्त गर्ने मौका हो। त्यस समयको बसोबास गर्ने एक राम्रो उदाहरण पेनिक्सको प्रसिद्ध ग्रन्थ हो।
पुरातन रोम को कला मा अवधि मूर्तिकला चित्र
पुरातन रोममा, कलाको धेरै अनोखा कार्यहरू बसको रूपमा सिर्जना गरियो। यो ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ कि पुरातन रोमन संस्कृतिमा मूर्तिकला चित्रको विशेष अवधि थियो, यसलाई पुरातन रोमको कला विकासमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवस्था मानिन्छ ।
यो अवधि मुख्य रूपमा विशेषता हो कि यस तथ्यले स्वामीहरूले एक व्यक्तिको चरित्र र उनीहरूको काममा यथार्थवादी उपस्थितिलाई सही रूपमा बुझ्न खोज्यो। यो दिशा पुरातन रोमन कलामा पहिलो स्थान लिनुभयो।
त्यो समयको बसोबासहरूको ज्ञात उदाहरण सम्राट अगस्टसको फोहोर, क्लौडियस र धेरै अन्यको बस्ट हुन्। अब संसारको धेरै संग्रहालयहरूमा कलाको यी उत्कृष्ट कामहरू राखिएका छन्।
हाम्रो देशमा बसहरू
निस्सन्देह, हाम्रो देशको अस्तित्वका धेरै वर्षका लागि प्रतिभाशाली मूर्तिकलाले धेरै र धेरै प्रसिद्ध व्यक्तिहरू सिर्जना गरेका छन्। तथापि, यो प्रवृत्ति सबै भन्दा व्यापक रूपमा फैलियो, सायद, सोभियत युगमा। हाम्रो विशाल देशको लगभग हरेक शहरमा स्टललिन वा लेन्सको बस्ट देख्न सकिन्छ। तिनीहरू साँच्चै व्यापक वितरण पाए र मुख्य रूपले कांस्य बनेका थिए। स्टललिनको घडीको उद्घाटन सधैं सख्त घटनाहरू संग थियो। यी मूर्तिकलाहरू अहिले रूसको धेरै शहरहरूमा सानो सडक र विशाल वर्गहरूमा देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, मस्कोमा स्टललिनको बस्ट एकै पटकमा धेरै ठाउँमा स्थापना गरिएको छ। तिनीहरू दुवै सोभियत समय र सोभियत संघ पछि लागेका थिए।
यो कला किन दिशामा धेरै लोकप्रिय छ?
पहिले नै माथि उल्लेखित रूपमा, बसहरूले धेरै मानिसहरूको संस्कृति र कलामा सधैं महत्त्वपूर्ण स्थानमा कब्जा गरेको छ। सबै भन्दा रोचक कुरा के हो, यो मानिसजातिको अधिकांश इतिहास भरिएको छ। त्यसोभए किन यो दिशा सधैँ मान्छेहरूमा यति चासो छ र उनीहरूलाई थप नयाँ वस्तुहरू सिर्जना गर्दछन्?
पहिलो, मानिसहरू सधैँ कलामा यथार्थवादमा चासो राख्छन्, त्यसैले तिनीहरूले वास्तविक व्यक्तिगत सुविधाहरू ढुङ्गा र धातुमा पठाए। दोस्रो, कलाको यस्तो काम एक प्रकारको स्मारक हो। बस्ट तपाईं एक प्रसिद्ध व्यक्ति सताउन र धेरै पीडितहरु को माध्यम ले उनको स्मृति को संचार गर्न अनुमति दिन्छ। तेस्रो कारण यस कार्यलाई सफलतापूर्वक प्रविधिमा रुचि छ, किनभने यस मूर्तिकलाको सिर्जना एक सजिलो कार्य होइन। यद्यपि, थुप्रै मालिकहरूले यो समस्या आफ्नै तरिकामा समाधान गर्ने प्रयासमा रुचि राख्छन्, त्यसैले तिनीहरू थप नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेका छन्।
कुमोभ बच्चाको दोस्रो आमाबाबु हो
Aerosol bedbugs देखि "कम्ब्याट": प्रयोग, लाभ, संरचना र समीक्षा लागि निर्देशन
कला। टिप्पणी संग रूसी संघ को नागरिक प्रक्रिया को 85 कोड
हामी व्याख्या गर्छौं कि मान्छे प्रकृति को अध्ययन गर्छन
प्रमाणपत्रहरू - यो के हो? प्रमाणपत्र को प्रकारका। प्रमाणपत्र जारी
Siofor पातलो - पेशेवरों र प्रयोग को बुरा
साइटमा dandelions उन्मुक्ति कसरी जान्न चाहनुहुन्छ?
के थप महत्त्वपूर्ण छ? अथवा विजेता ....